Mabaadiida asaasiga ah iyo talaabooyinka Xeerka Kireysiga ee Deganayaasha waxaa lagu muujiyey Buuggaan, kaas oo ka jawaabaya suaalaha kireysiga ee badanaa la is weydiiyo. Haddii aadan ka hellin jawaaabta aad u baahan tahay buuggaan, ama u baahan tahay macluumaad ama kaalmo intaas ka badan la xiriir Talasiinta kireystaha. Waxaa jira adeegyo talada bixiya meel kasta oo fiktooriya ka mid ah. Kuwani waa lacag la’aan waana adeegyo qarsoodi ah kana caawimaya kireystayaasha inay xaqooda raadsadaan. Ururka Kireystaayshu waa ka mid ah kuwaas. Waxaad naga wici kartaa Tel: 03 9416 2577 ama naga eeg meesha macluumaadkayagu ku jiro: www.tuv.org.au halkaas oo aad ka hellayso adeega talasiinta ee kuugu dhow. Haddii aad u baahan tahay mutarjum naga wac Adeega ku Tarjumida Afka Tel: 131 450.